Liiska Wasaaradaha La Qariyay Ee Madaxweyne Kornayl Muuse Biixi Qaybta U Siiyay Beeshiisa+Eexda & Qaraabakiilka Hadheeyay Xukumadiisa. – Xeernews24
25. Februar 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
Madaxweyne Biixi ayaa bilihii ugu danbeeyey ku dhawaqayey magacaabidda xukumadiisa. isla-markaana waxaa uu madaxweynuhu xilalka ugu mihiimsan uguna badan ku taxay Beesha uu ka soo jeeddo. isagoo magacaabay Sagaal digreeto oo cudoon oo ay ku jiraan qaar ka midda wasaaraddo iyagu qarsoonaa. sida Maareeyaha Duulista iyo Hawadda.(Wasaaraddii Duulista iyo Hawadda). Mareeyaha Haay”adda WFO . Keydka Qaranka Iyo Hortaga Aafooyinka.(Wasaarada-Dib-U-Dejinta Qaranka) Iyo Agaasimaha Wadooyinka Iyo Gaadiidka (oo ah laba qaybood oo laga soo gooyey wasaaradda Hawlaha guud iyo wadooyinka iyo Wasaaradda Duulista Iyo Gadiidka kaasi oo noqonaya macno ahaan : Wasaaradda Wadooyinka Iyo Gaadiidka.
Hadaba waxaa la yaab kale ku noqotay Bulshadda Somaliland talaabaddii ugu danbeysay. ee Wasaaraddii Madaxtooyadda oo ahayd wasaaradda dalka ugu hadal-haynta badnayd Xukuumaddii hore ee Kulmiye ayaa iyadana loo magacaabay kii ugu danbeeyey oo loogu magac-daray Agaasimaha Madaxtooyadda Somaliland.
Wasaradahan haayadaha ku qarsoon ee afarta ka kooban waxaa ka horeeyey kuwa caadiya . Waa Wasaaradaha : Arimaha Debadda Iyo Maalgashiga. Warfaafinta iyo wacyi-gelinta . Boosaha Iyo Isgaadhsiinta, Wasiir ku-Xigeenka Arimaha Gudaha iyo Wasiir-ku-Xigeenka Xanaanada Xoolaha iyo Kaluumeysiga Iyo xilal aad u fara-badan sida: Agaasimayaasha ugu badan. Badhasaabyo. Iyo kuwii Haayadaha. taliyaasha Sare ee ciidamadda kala duwan iyo Maxkamadaha oo sidoodii loo daayey iyo xilalkale.
Isweydiintu waxay tahay : Maxaa isla soo doontay intan oo masuul ah ee qarsoon oo loo waayey qof tarraxa oo aan beesha Madaxweynaha ahayn?, Maxayse tahay ujeeddada jagooyinka qarsoon ka danbeysaa? . Muxuu u maleynayaa Madaxweynuhu inuu umadiisa ku siri-karo cadaaladda ka fileysay siiba wasaaraddaha qarsoon ee uu magacaabay Beeshiisa oo markii horeba saami aad u fara-badan haysatay.
dhinaca Masuuliyiinta faraha badan. ee sida caadiga iyo sida qarsoon loo magaacabay ayaa Tafsiir Qabyaaladeed Laga Bixiyey, waxayna Doodihii Ugu faraha Badnaa Ka Abuurmeen Baraha Xidhiidhka Bulshada ee Internetka. Iyadoo bilihii iyo maalmihii ugu dambeeyey si weyn loogu falan-qeeyey digrootooyinkaa Madaxweynaha , siiba magacaabistii ugu danbeysay oo laga soo saaray tafsiir qabyaaladeed – ka-dibna doodo ka dhasheen.
Si kastaba ha ahaatee su’aasha muhiimka ah ee lays-waydiinayaa waxa ay tahay Madaxweyne Muuse ma waxa uu doonayaa in Beeshiisa oo qudha uu xilalka dalka oo dhan u magacaabo ?. Haddiiba ay jawaabtu tahay haa. Siddee ayey xukuumaddiisu ku noqonaysaa mid la wada leeyahay oo ay iska wada dhex arkaan Beelaha Somaliland oo dhami?.Meeday Cadaladdii uu ku dhaartay Madaxweyne Biixi . ma sidan ayey ahayd?
Soomaalidu waxa ay ku maahmaahdaa Biyaha aan hortooda arkaaya dabadoodana maxaan ka sugnaa, waxa aan maahmahdan u soo qaatay oo aan uga jeedaa wax Cadaalad oo kale lagama fili karo mustaqbalka Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa ay noqon doonto iyada oo ay maanta hortaalo xilalkaa faraha badan ee inta badan qarsoon-tahay ee cadaalad daradda iyo anaa qalinka iskuba hayaba ka muuqato . siiba magacaabistii u dambaysay ee uu Madaxweynuhu ku sameeyay digreetaddii ugu danbeysay ee uu Shalaytadaa qoyan uu magacaabay.
Sidoo kale dadka siyaasadda aad u falan-qeeyaa ayaa waxay ku macneeyeen . in xitaa dadkii ay siyaasadda iskaga horyimadeen Madaxweyne Muuse aanay haba-yartee Beelahoodu kaba dhex-muuqan dowladiisa. taasi oo ka dhigaysa in aanay sinaba u sax-sanayn saami qaybsiga Somaliland. sidoo kale waxay banaanka soo dhigtay hadafkii iyo Hindisahii Madaxweynaha. kana turjumaysa siyaasad u qarsoonayd, isagoo muddo ka yar sadex bilood uun uu talada hayay.
Sida muuqata,Madaxweyne Muuse haddii uu ku sii socdo ama uu hirgeliyo arrimo fara-badan oo ugub ku ah Siyaasadda Somaliland, siiba tallaabooyinka uu qaadayo . si uu awoodda oo dhan gacanta beeshiisa ay ku soo koobo. Waxaan qabaa in danta Somaliland ay ku jirto in mansabyadda dowladdu ay isu-dheelli tirmaan. caddaaladdu waa in saami qaybsi cadaalad. Wax-qabad sinnaan ah, fulin aan eex lahayn, adeeg aan qalooc ku fadhiyin lala yimaaddo.Ilaa iminka kama muuqato dawladiisa.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/11/Muussa-Bixii.jpg 640 960 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-02-25 08:55:062018-02-25 08:55:06Liiska Wasaaradaha La Qariyay Ee Madaxweyne Kornayl Muuse Biixi Qaybta U Siiyay Beeshiisa+Eexda & Qaraabakiilka Hadheeyay Xukumadiisa.
Maxay tahay sababta Itoobiya loogu soo rogay xaalad degdeg ah? Xaalka Itoobia oo jid xun cagta saartay gaar ahaan Gobolada Oramada iyo Amx...